Hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (2008) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn
Hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ခြုံငုံသုံးသပ် (2008)
Hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ခြုံငုံသုံးသပ်။
Andrology ၏အာရှဂျာနယ် (2008) 10, 36–43; doi:10.1111/j.1745-7262.2008.00375.x
Nilgun Gurbuz, Elnur Mammadov နှင့် Mustafa Faruk Usta
Andrology, Urology ဌာန, ဆေးပညာ Akdeniz တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Antalya 07070, တူရကီ၏ပုဒ်မ
စာပေးစာယူ: ဒေါက်တာ Mustafa Faruk usta, Andrology, Urology ဌာန, ဆေးပညာ Akdeniz တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Dumlupinar Bulvari, Kampus 07070, Antalya, တူရကီပုဒ်မ။ ဖက်စ်: + 90-242-237-6343 ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လူသားများတွင်အန်ဒရိုဂျင်ကျဆင်းမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားပါဝင်သည်သောလက်တွေ့ရုပ်ပုံအဖြစ်တင်ဆက် erectile capasity လျော့, နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ပျက်ကွက် orgasm နှင့်လိင်အပျော်အပါးလျှော့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခံစားချက်အတွက်အပြောင်းအလဲကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းလျော့, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ကျရောဂါနဲ့စိတ်တိုတာတွေလည်းအန်ဒရိုဂျင်မလုံလောက်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ကြီးထွားမှု, နှင့်လိင်တံ၏ maintanence အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကျယ်ပြန့်လက်ခံလိုက်ပါသည်။ , erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အတိအကျကိုအကျိုးသက်ရောက်နေဆဲအတိအကျမသိရသေးဖြစ်နေဆဲပေမယ့်လတ်တလောစမ်းသပ်လေ့လာမှုများအန်ဒရိုဂျင်နှင့် erectile function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုထပ်တိုးရှိသည်။ Preclinical လေ့လာမှုများအန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့လိင်တံ၏အာရုံကြောတည်ဆောက်ပုံတွင် penile တစ်ရှူးကျုံ့ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပို့ဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အဆီပါဝင်တဲ့ဆဲလ်စုဆောင်းခြင်းစေနှင့် endothelial ၏ပရိုတိန်းစကားရပ်များနှင့်ပုံမှန် erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍပေးသောအာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthases (ဧနုတ်သည်နှင့် nNOS), နှင့် phosphodiesterase type ကို-5 (PDE-5), ယုတ်လျော့လေ၏။ မကြာသေးမီကစာပေအလင်းတွင်, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာ penile တစ်ရှူးနှင့် erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်များအဆောက်အဦများ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် maintanence အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတင်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်။ ကျွန်တော်ယောက်ျားအိုမင်းအတွက် hypogonadism ၏ aetiology, pathophysiology, ပျံ့နှံ့နေတဲ့, ရောဂါနှင့်ကုသမှုရွေးချယ်စရာကောက်ချက်ချဟာလက်တွေ့လေ့လာမှုများအရသိရသည် Furhermore ။
testosterone ဟော်မုန်း, erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်, လက်ခဏာနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်း hypogonadism
Krause W၊ Mueller U, Mazur A. လူ ဦး ရေအခြေပြုနေထိုင်မှုပုံစံ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ လိင်ဘဝနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်ဟော်မုန်းအခြေအနေများရှိတံတွေးတွင်တံတွေး၌ steroid ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်း - ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု။ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသား 2002; ၅: ၂၀၃-၁၅ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Morales တစ်ဦးက, Buvat J ကို, Gooren LJ, Guay ကို AT, Kaufman JM, Tan က HM, et al။ ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ endocrine ရှုထောင့်။ J ကိုလိင် Med 2004; ၁: ၆၉-၈၁ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Saad က F, Grahl AS, Aversa တစ်ဦးက, Yasin AA ကို, Kadioglu တစ်ဦးက, Moncada ငါ et al။ erectile function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုထုံးများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ BJU Int 2007; 99: 988-92 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
El-Sakka AI, Hassoba HM ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ခမ်း။ J ကို Urol 2006; 176: 2589-93 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Erectile လုပ်ဆောင်ချက်တွင် Foresta C၊ Carretta N၊ Rossato M၊ Garolla A၊ Ferlin A. ၏အခန်းကဏ္။ ။ J ကို Urol 2000; 171: 2358-62 ။ | ဆောင်းပါး | ChemPort |
Aversa တစ်ဦးက, Isidori လေး, De Martino က M, Caprio M က, Fabrini အီး, Rocchietti-မတ်လ M က, et al။ အန်ဒရိုဂျင်နှင့် penile စိုက်ထူခြင်း - eosterile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားများတွင်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းနှင့် cavernous vasodilation အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Clin Endocrinol (Oxf) 2000; 53: 517-22 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Harman SM, Metter EJ, Tobin JD, Pearson J, Blackman MR ။ ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်းနှင့်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်အိုမင်း၏ longitudinal သက်ရောက်မှု။ အို၏ Baltimore လောင်ဂျီတွဒ်လေ့လာမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 724-31 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Morley je, Kaiser FE, Pery HM III ။ testosterone ဟော်မုန်းအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကို။ ကျန်းမာသောသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Luteinizing hormone နှင့် follicles stimulating hormone ။ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု 1997; 46: 410-3 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Araujo AB, Esche GR, Kupelian V, O'Donnell AB, Travison TG, Williams RE et al။ ယောက်ျားများတွင်လက်ခဏာ androgen ချို့တဲ့မှုပျံ့နှံ့ခြင်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 4241-7 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Makhsida N၊ Shah J, Y G, Fish H, Shabsigh R. Hypogonadism နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ: testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Urol 2005; 174: 827-34 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Eratile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် Kratzik CW, Schatzl, G, Lunglmayr, G, Rücklingerအီး, Huber ဂျေသက်ရောက်မှု, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းများနှင့် testosterone ဟော်မုန်း။ J ကို Urol 2005; 174: 240-3 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Kaplan SA, Meehan AG, Shah A. Testosterone ဟော်မုန်းလျော့နည်းမှုသည်အဝလွန်သောအမျိုးသားများအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောအသက်အရွယ်ကြောင့်သက်တမ်းလျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလူများတွင်တွေ့ရသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏မြင့်မားသောဖြစ်ပွားမှုအတွက်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသနည်း။ J ကို Urol 2006; 176 (4 Pt 1): 1524-7; ဆွေးနွေးမှု 1527-8 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Guay A, Jacobsen J. testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များ၊ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ (စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုအရ)၊ အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောလူ ဦး ရေတွင်အင်ဆူလင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ J ကိုလိင် Med 2007;4(4 Pt 1): 1046-55 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Zohdy W, Kamal EE, Ibrahim Y. Androgenity ချို့တဲ့မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအဝလွန်ယောက်ျားအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သော penile duplex parameters တွေကို။ J ကိုလိင် Med 2007; 4: 797-808 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Montorsi F, Oettel M. Testosterone နှင့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိုက်ထူမှုများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ J ကိုလိင် Med 2005; ၂: ၇၇၁-၈၄ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Traish AM, Guay A. အန်ဒရိုဂျင်သည်လူ၏ penile စိုက်ထူမှုအတွက်အရေးပါပါသလား။ လက်တွေ့နှင့် preclinical သက်သေအထောက်အထား Examinig ။ J ကိုလိင် Med 2006; 3: 382-407 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Traish AM, Goldstein I, Kim N. Testosterone နှင့် erectile function: အခြေခံသုတေသနမှ androgen မလုံလောက်မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်တွေ့အစီအစဉ်အသစ်သို့။ Eur Urol 2007; 52: 54-70 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Keast JR, Gleeson RJ, Shulkes တစ်ဦးက, မောရစ် MJ ။ ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ကြွက် vas deferens အတွက် terminal ကို axon သိပ်သည်းဆနှင့် neuropeptide စကားရပ်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ maintanence ဆိုးကျိုးများ။ Neuro-သိပ္ပံ 2002; 112: 291-398 ။
Giuliano က F, Rampin အို, Schirar A, Jardin တစ် ဦး, ရူးဆိုး JP ။ penile စိုက်ထူ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းချုပ်မှု: ကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့်မော်ဂျူ။ J ကို Neuroendocrinol 1993; ၅: ၆၇၇-၈၃ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Rogers RS, Graziottin TM, Lin CM, Kan YW, Lue TF ။ Intra-cavernosal သွေးကြောဆိုင်ရာ endothelial ကြီးထွားမှုအချက် (VEGF) ဆေးထိုးခြင်းနှင့် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကာကွယ်သည့် VEGF ဗီဇကုထုံးသည်ကြွက်များတွင် venogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။ Int J Imp Res 2003; ၁၅: ၂၆-၃၇ ။ | ဆောင်းပါး | ChemPort |
Suzuki N, Sato Y, Hisasue SI, Kato R, Suzuki K, Tsukamato T. testosterone ဟော်မုန်း၏အူအတွင်း၊ အမြှေးပါးသွေးဖိအားအပေါ်သက်ရောက်မှုသူသည်ကြွက်များတွင် preoptic medရိယာနှင့် cavernous အာရုံကြောကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ J ကို Androl 2007; ၂၈: ၂၁၈-၂၂ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Lugg ဂျေအေ, Rajfer J ကို, Gonzales-Cadavid NF ။ Dihydrotestosterone သည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကြွက်များတွင်ရှိသည့် Penile စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်တက်ကြွစွာအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်သည်။ Endocrinology 1995; 136: 1495-501 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Seo SI၊ Kim SW, Paick JS ခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအင်ဒရိုဂျင်၏သက်ရောက်မှုများ penile တုံ့ပြန်မှု၊ အာရှ J ကို Androl 1999; 1: 169-74 ။ | PubMed | ChemPort |
Schirar A၊ Bonnefond C, Meusnier C, Devinoy E. Androgens တို့သည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase Messenger ribonucleic အက်ဆစ်ဖော်ပြမှုကိုကြွက်များတွင်သူကအဓိကတင်ပါးဆုံတွင်း ganglion ၏အာရုံခံ။ Endocrinology 1997; 138: 3093-102 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Zhang က XH, Morelli တစ်ဦးက, Luconi M က, Vignozzi L ကို, Filippi S က, Marini M က, et al။ Testosterone ဟော်မုန်းသည် PDE-5 ဖော်ပြချက်နှင့်ကြွက် corpus cavernosum တွင် tadalafil အပေါ် vivo တုန့်ပြန်မှုအားထိန်းညှိပေးသည်။ Eur Urol 2005; 47: 409-16 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Morelli တစ်ဦးက, Filippi S က, Mancina R ကို, Luconi M က, Vignozzi L ကို, Marini M က, et al။ အန်ဒရိုဂျင်သည် phospodiesterase type5expression နှင့် corpora cavernosa တွင်အလုပ်လုပ်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။ Endocrinology 2004; 146: 2253-63 ။ | ဆောင်းပါး | ChemPort |
Armagan A၊ Kim NN, Goldstein I, Traish AM ။ testosterone ဟော်မုန်းနှင့် erectile လုပ်ဆောင်ချက်အကြားဆေး - တုန့်ပြန်မှုကြားဆက်ဆံရေး - အရေးကြီးသောတံခါးခုံ၏တည်ရှိမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Androl 2006; 27: 517-26 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Traish AM, Park K, Dhir V, Kim NN, Moreland RB, Goldstein I. ယုန်ပုံစံတွင်သန္ဓေသားလောင်းနှင့် androgen အစားထိုးတို့၏ဆိုးကျိုးများ။ Endocrinology 1999; 140: 1861-8 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Shen ZJ, Zhou XL, Lu YL, Chen ZD penile ultrastructure အပေါ် androgen ဆုံးရှုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရှ J ကို Androl 2003; ၅: ၃၃–၆ ။ | PubMed | ChemPort |
Traish AM, Toselli P, Jeong SJ, Kim NN အဆိုပါ orchiectomized ယုန်၏ penile Corpus cavernosum အတွက် Adipocyte စုဆောင်းခြင်း: အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့အတွက် venoocclusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အလားအလာယန္တရား။ J ကို Androl 2005; 26: 242-8 ။ | PubMed |
Bhasin S က, တေလာ WE, Singh က R ကို, Artaza J ကို, Sinha-Hikim ငါ Jasuja R ကို, et al။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် androgen သက်ရောက်မှု၏ယန္တရား: သူ androgen အရေးယူပစ်မှတ်အဖြစ် mesenchymal pluripotent ဆဲလ်။ J ကို Gerontol တစ် ဦး က Biol သိပ္ပံ Med သိပ္ပံ 2003; 58: M1103-10 ။ | PubMed |
Singh R, Artaza JN, Taylor WE, Gonzales-Cadavid NF, Bhasin S. Androgens တို့သည် myogenic ကွဲပြားခြားနားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး C3H 10T1 /2pluripotent ဆဲလ်များ၌ androgen receptor-mediated လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် adipogenesis ကိုတားဆီးသည်။ Endocrinology 2003; 144: 5081-8 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Corradi LS, RM, Carvalho HF, Taboga SR တတ်၏။5၏တားစီး -reductase လှုပ်ရှားမှုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ gerbil ventral prostate တွင် stromal remodeling နှင့်ချောမွေ့သောကြွက်သားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ၂၀၀၄; 2004: 72-198 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Zhang က XH, Filippi S က, Morelli တစ်ဦးက, Vignozzi L ကို, Luconi M က, Donati S က, et al။ Testosterone သည်ဆီးချိုရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် sildenafil တုန့်ပြန်မှုများကိုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတိကျသောတိကျသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လ်များတွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ J ကိုလိင် Med 2006; 3: 253-64 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Cohan P ကို, Korenmann SG ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 2391-4 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Jannini EA ၏, Screponi အီး, Carosa အီး, Pepe M က, Lo Guidice က F, Trimarchi က F, et al။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသွေးရည်ကြည် tstosterone အတွက်ပြောင်းပြန်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Int J ကို Androl 1999; 22: 385-92 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Becker က AJ, Ückert S က, Stief CG, Scheller က F, Knapp WH, Hartmann ဦး, et al။ ကျန်းမာသောယောက်ျားများနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော penile အခြေအနေများအတွင်း Cavernous နှင့်စနစ်တကျ testosterone ဟော်မုန်းပလာစမာအဆင့်ကို။ Urology 2001; 58: 435-40 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Carani C, Scuteri A, Marrama P, Bancroft J. ပုံမှန်ယောက်ျားများတွင် nooster ၏ enile tumescence အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Horm Behav 1990; 24: 435-41 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Aversa A၊ Isidori AM, Spera G, Lenzi A, Fabbri A. Androgens တို့သည် evernile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောလူနာများအတွက် sildenafil ကို cavernous vasodilation နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Clin Endocrinol (Oxf) 2003; 58: 632-8 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Cunningham GR, Hirshkowitz အမ်။ ဖင်စတောရောဒင်နှင့်အတူ steroid5alpha-reductase ၏တားစီးခြင်း - ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိုက်ထူခြင်း၊ J ကို Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1934-40 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Tosti တစ်ဦးက, Pazzaglia M က, မြေဆီ M က, ရော့စီတစ်ဦးက, Rebora တစ်ဦးက, Atzori L ကို, et al။ androgenetic alopecia အတွက် finasteride ယူပြီးဘာသာရပ်များအတွက် erectile function ကိုနိုင်ငံတကာအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏အကဲဖြတ်။ Arch Dermatol 2004; 140: 857-8 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
ရို RC, Giuliano က F, Carson CC ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်ဆီးလမ်းကြောင်းလက္ခဏာများ (LUTS) သည်ညင်သာပျော့ပျောင်းသောဆီးကြိတ် hyperplasia (BPH) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Eur Urol 2005; 47: 824-37 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Peters, CA, Walsh PC ။ ligninizing-hormone-releasing hormone agonist nafarelin acetate သည်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ hyperplasia အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ N ကို Eng J ကို Med 1987; 317: 599-604 ။ | ChemPort |
Eri LM, Tveter KJ ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်လူနာများကို ligninizing hormone relasing hormone agonist leuprolide ကိုလက်ခံပေးခြင်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ hyperplasia ကိုကုသရာတွင်ဖြစ်သည်။ J ကို Urol 1994; 152: 448-52 ။ | PubMed | ChemPort |
Schiainer RC၊ Schreiner-Engel P၊ Mandeli J၊ Schanzer H၊ Cohen E. ကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1990; 147: 766-41 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Cunningham ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Karacan ငါ Ware JC, Lantz GD, Thornby JI ။ သင်ျခြိုအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့ prolactin အဆင့်ဆင့်နှင့် nocturnal penile tumescence (NPT) အကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Androl 1982; 3: 241-7 ။
Kwan M က, Greeleaf WJ, မန်း J ကို, Crapo L ကို, Davidson JM ။ အထီးလိင်အပေါ် androgen လုပ်ဆောင်မှု၏သဘောသဘာဝ - hypogonadal အမျိုးသားများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်း - ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှုလေ့လာချက်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1983; 57: 557-62 ။ | PubMed | ChemPort |
Schiavi RC၊ White D၊ Mandeli J. ကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းအမျိုးသားများအိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းခွင် - gonadal လုပ်ဆောင်မှု။ Psychoneuroendocrinology 1992; 17: 599-609 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
လျူ py, ရီ B, Wishart သည် SM, Jimenez M က, Jung DG, Grunstein RR, et al။ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အိပ်ချိန်၊ အသက်ရှူခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသောဆေးပမာဏမြင့်မားသော testosterone ဟော်မုန်းကိုတိုတောင်းသောသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3605-13 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Guay AT, Jacobsen J, Perez JB, Hodge MB, Velasquez E. Clomiphene သည်ဒုတိယအဆင့် hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှစ်ခုလုံးရှိသောအမျိုးသားများတွင်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကိုတိုးမြှင့်သည်။ Int J Imp Res 2003; ၁၅: ၁၅၆-၆၅ ။ | ဆောင်းပါး | ChemPort |
Tancredi တစ်ဦးက, Reginster JY, Schleich က F, Pire, G, Maassen P ကို, Luyckx က F, et al။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကျဆင်းနေအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် hypogonadism ၏သူဖော်ထုတ်အိုမင်းသောယောက်ျားအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့၏စိတ်ဝင်စားမှု (ADAM) မေးခွန်းလွှာ၏အကျိုးစီးပွား။ Eur J ကို Endocrinol 2004; 151: 355-60 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Heinemann LA, Saad F, Heinemann K, Thai DM ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအထီးကျန်ရောဂါလက္ခဏာများ (AMS) ၏ရလဒ်သည်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့မှုအတွက်စစ်ဆေးသည့်အရာများ၏ရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသား ၂၀၀၄; ၇: ၂၁၁-၈ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Corona, G, Mannucci အီး, Petrone L ကို, Balercia, G, Fisher ကအေဒီ, Chiarini V ကို, et al။ ANDROTEST: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာ hypogonadism ၏သူပြသူတစ် ဦး ကစနစ်တကျအင်တာဗျူး။ J ကိုလိင် Med 2006; 3: 706-15 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
အမျိုးသားများတွင် Nieschlag E၊ Mauss J၊ Coet A၊ Kicovic P. Plasma androgen အဆင့်များကို testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းလျှော့နည်းစေပြီးအမျိုးသားများအတွက်။ Acta Endocrinologica 1975; 79: 366-74 ။ | PubMed | ChemPort |
Schulte-Beerbühl M က, testosterone ဟော်မုန်း, dihydrotestosterone, luteinizing ဟော်မုန်းနှင့် follicles ၏ Nieschlag အီးနှိုင်းယှဉ် testosterone ဟော်မုန်း enanthate သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏ဆေးထိုးပြီးနောက်သွေးရည်ကြည်ထဲမှာဟော်မုန်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့။ Fert မြုံ 1980; 33: 201-3 ။
Behre HM, von Rckardstein S, Kliesch S, Nieschlag E. 7-10 နှစ်ကျော် transscrotal testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျား၏ရေရှည်အစားထိုးကုထုံး။ Clin Endocrinol 1999; 50: 629-35 ။ | ဆောင်းပါး | ChemPort |
Dobs AS, Meikle W, Arver S, Sanders SW, Caramelli KE, Mazer NA ။ hypogonadal ယောက်ျားများ၏ကုသမှုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏နှစ်ကြိမ်ဆေးထိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ် ဦး ထိုးဖောက် - တိုးမြှင့် testosterone ဟော်မုန်း transdermal စနစ်၏ Pharmacokinetics, ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 3469-78 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ဝမ်ကို C, Cunningham, G, Dobs တစ်ဦးက, Iranmanesh တစ်ဦးက, Matsumato လေး, Synder PJ, et al။ Long-tem testosterone ဟော်မုန်း (AndroGel) ကုသမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စိတ်နေသဘောထားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်၊ J ကို Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2085-98 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Korbonits M က, Slawik M က, Cullen က D:, Ross က RJ, Stalla, G, Schneider H ကို, et al။ hypogonadal အထီးများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကော် patch ကိုနှင့်အတူ, ခိုင်မာတဲ့, အသစ်တစ်ခု testosterone ဟော်မုန်း bioadhesive buccal စနစ်နှိုင်းယှဉ်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2039-43 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Schubert M က, Minnemann T က, Hübler: D, Rouskova: D, Christoph တစ်ဦးက, Oettel M က, et al။ အူအတွင်းပိုင်းကြွက်သား testosterone ဟော်မုန်း undeconate: hypogonadism နှင့်အတူယောက်ျား၏ရေရှည်ကုသမှုစဉ်အတွင်းဝတ္ထု testosterone ဟော်မုန်းရေးဆွဲရေး၏ pharmacokinetic ရှုထောင့်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 5429-34 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Jain P, Rademaker တစ် ဦး, McVary K. Testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်: meta-analysis သည်၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol 2000; 164: 371-5 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
hypogonadal ခွန်အားမရှိခြင်းအတွက် Morales A၊ Johnston B၊ Heaton JP၊ Lundie M. Testosterone ဖြည့်စွက်ချက် - ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအစီအမံများနှင့်ကုထုံးရလဒ်များ။ J ကို Urol 1997; 157: 849-54 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Buvat J, Lemaire အေ endocrine စစ်ဆေးခြင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား 1 022 အတွက်စမ်းသပ်: လက်တွေ့အရေးပါမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာ။ J ကို Urol 1997; 158: 1764-7 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ဝမ်ကို C, Swedloff RS, Iranmanesh တစ်ဦးက, Dobs တစ်ဦးက, Snyder PJ, Cunningham, G, et al။ Testosterone ဟော်မုန်းလေ့လာမှုအဖွဲ့။ Transdermal testosterone ဟော်မုန်းသည်လိင် hpogonadal အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ J ကို Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 2839-53 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Isidori လေး, Giannetta အီး, Gianfrilli: D, ဂရိ EA ၏, Bonifacio V ကို, Aversa တစ်ဦးက, et al။ testosterone ဟော်မုန်း၏လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု - meta-analysis ၏ရလဒ်များ။ Clin Endocrinol (Oxf) 2005; 63: 381-94 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Yassin AA, Saad F. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတိုးတက်မှုနှောင်းပိုင်း hypogonadism ကို testosterone ဟော်မုန်းနဲ့သာကုသပေးတယ်။ J ကိုလိင် Med 2007; 4: 497-501 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Kalinchenko SY, Kozlov GI, Gontcharov NP, Katsiya GV ။ ခံတွင်း testosterone ဟော်မုန်းလျော့နည်းသွားတာက sildenafil citrate ကုထုံးကိုမအောင်မြင်တဲ့လူနာတွေအတွက်ဆီးချိုရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသား 2003; ၆: ၉၄-၉ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Shabsigh R, Kaufman JM, Steidle C, Padma-Nathan H. Testosterone ဂျယ်လ်ကို Sildenafil အားတွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်ကျပန်းလေ့လာခြင်းအား Sildenafil တစ် ဦး တည်းကိုမတုံ့ပြန်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် sildenafil ကိုလေ့လာခြင်း။ J ကို Urol 2004; 172: 658-63 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Greenstein A၊ Mabjeesh NJ၊ Sofer M၊ Kaver I၊ Matzkin H၊ Chen J. testildone ဟော်မုန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော sildenafil သည် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုတစ်ခုတည်းမအောင်မြင်သော hypogonadal အမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုးတက်စေပါသလား။ J ကို Urol 2005; 173: 530-2 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Yassin AA ကို, Saad က F သေဆုံးခဲ့သူ။ (ဂျာမန်) monotherapy အဖြစ် tadalafil တုံ့ပြန်မ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ hypogonadal လူနာ Testosterone နဲ့ tadalafil နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကုထုံး။ Blickpunkt DER မန်း 2003; 2: 37-9 ။
El-Sakka AI၊ Hassoba HM၊ Elbakry လေး၊ Hassan HA ။ hypogonadism နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတိကျတဲ့ကိုပဲ: testosterone ဟော်မုန်းကိုအစားထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကိုလိင် Med 2005; ၂: ၂၃၅-၄၀ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Saad က F, Kamischke တစ်ဦးက, Yasin တစ်ဦးက, Zitzmann M က, Schubert M က, Jockenhovel က F, et al။ ရှစ်နှစ်ကျော်ကာလကြာရှည်စွာပြုလုပ်သော parentral testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံ။ အာရှ J ကို Androl 2007; ၉: ၂၉၁–၇ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |